ဂန္ထဝင်အမျိုးသမီး Cowsuede ခုံဖိနပ်အရည်အသွေးမြင့်မားသောသက်တောင့်သက်သာခြေထောက် - Goodao Technology Co. , Ltd.
ဂန္ထဝင်အမျိုးသမီးများ Cowsuede ခုံဖိနပ်အမြင့်သုံး ...
တရုတ်နိုင်ငံအတွက် ၂၀၂၀ အရည်အသွေးမြင့် Driv ...
Mens Cowsuede Moccasin ညှပ်ဖိနပ် Mens Venetian ဒေါက်တာ ...
ဂန္ထဝင်အမျိုးသမီးများ Cowsuede ခုံဖိနပ်အရည်အသွေးမြင့်မားသောသက်တောင့်သက်သာရှိသည်
မော်ဒယ် NO ။ : BLM0411B
အရောင်: TAN / NAVY OTHERS
ခြေချောင်း - အလှည့်ကျ
ရာသီ - ဆောင်း ဦး ရာသီ၊ နွေ ဦး ရာသီ၊ ဆောင်းရာသီ
အရွယ်အစား - အမျိုးသမီး Us6-11 #
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: B-LAND သို့မဟုတ်အခြားသူများ
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်: COWSUEDE အပေါ်သို့
မူလအစ - တရုတ်
ဆိပ်ကမ်း: ရှန်ဟိုင်း / Ningbo
ထုပ်ပိုး: 1pr / polybag; ည - ချိတ် / ဖိနပ်
ပုံး: ပုံးတစ်ခဲလျှင် 6/12/18prs ။
ပိတ်သိမ်းမှုအမျိုးအစား - ချော်မှုနှုန်း
ဤ Clarks အမျိုးသမီးအိမ်ညှပ်သည်သင်၏ဗီရိုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပျော့ပျောင်းသောပစ္စည်းများသည်နွေးထွေးမှုနှင့်သက်တောင့်သက်သာရှိမှုကိုပေးစွမ်းနိုင်ပြီးအကြမ်းခံသောရာဘာ outsole သည်အပြင်ဘက်ဝတ်ဆင်ရန်အလင်းကိုပေးသည်။ ဤရွေ့ကားဖိနပ်လည်းအကြီးအလက်ဆောင်တွေလုပ်! ဒီဖိနပ်တွေကသေးငယ်တယ်။ အထူးသဖြင့်သင်အရွယ်အစားတစ်ဝက်နီးပါးရှိလျှင်သို့မဟုတ်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောခြေထောက်များရှိပါက၊
● Ultra Soft faux သားမွေးနံရံသည်သင်၏ခြေနွေးနှင့်သက်သောင့်သက်သာရှိသည်။
●အိမ်ကြီးဖိနပ်၊ မီးဖိုချောင်တွင်ချက်ပြုတ်ရန်၊ သင်၏ကလေးတွေနှင့်ကစားရန်၊ နေ့လည်ခင်းတွင်လက်ဖက်ရည်သောက်ရန်၊ စာတိုက်ပုံးသို့သွားရန်၊ အမှိုက်သရိုက်ယူရန်၊ မြက်ခင်းရေလောင်းရန်၊ သင်၏ပင်ပန်းနွမ်းနယ်သောခြေထောက်များကိုကောင်းမွန်စွာအနားယူနိုင်ရန်လက်ဆောင်တစ်ခု။
●ဖိနပ်အတွင်း၌သာမကပြင်ပတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းရှိမရှိကိုတာရှည်ခံချုပ်ကိုင်ထားသောတစ်ကိုယ်လုံးဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်း။
● button နှင့် seam line ကိုအလှဆင်ပါ။
FOB ဆိပ်ကမ်း SHANGHAI / NINGBO
ငွေပေးချေမှု T / T, မျက်မှောက်မှာ L / C
ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည် Cow-suede moccasin နှင့် slipper ထုတ်လုပ်ရန်ကောင်းသောအတွေ့အကြုံရှိသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရေရှည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သောပစ္စည်းပေးသွင်းသူများရှိသည်။ ၎င်းတို့သည်၎င်းတို့နယ်ပယ်တွင်အထူးပြုကြသည်၊ အရည်အသွေးကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်တည်ငြိမ်သောစွမ်းရည်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည် CA 65 Testing နှင့် AZO နှင့် Chrome VI အခမဲ့ရရှိနိုင်ကြောင်းအတည်ပြုပါသည်။ နိမ့်သောစျေးနှုန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးနှင့်ကျန်းမာရေးပစ္စည်းသည် ၀ ယ်သူအတွက် ပို၍ အရေးကြီးသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။ ထုတ်ကုန်အများစုသည်ယူကေနှင့်ယူအက်စ်တွင်ကုန်ပစ္စည်းများရောင်းချခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဒီဇိုင်းဌာနနှင့်အဖွဲ့ရှိသည်။ သင့်ထုတ်လုပ်မှုကိုအခြားသူများနှင့်အထူးပြုလုပ်လိုသောကြောင့်ဖိနပ်များဖွံ့ဖြိုးရန်သင့်အားကူညီနိုင်သည်။ ဒီဇိုင်းနှင့်ပစ္စည်းရွေးချယ်ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကြံပေးခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံအပေါ်အကြံဥာဏ်ပေးနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကို Cowsuede Slippers Moccasin အတွက်၎င်းတို့အားလုံးကိုဂရုပြုပြီးအလေးထား။ တာ ၀ န်ရှိသောစီးပွားရေးဆက်ဆံမှုကိုပေးရန်ဖြစ်သည်။ စျေးနှုန်းအားလုံးသည်သင်၏သက်ဆိုင်ရာမှာယူမှုအရေအတွက်ပေါ်မူတည်သည်။ နာမည်ကြီးတံဆိပ်များစွာကိုထူးခြားသော OEM ပံ့ပိုးသူကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်သက်ကြီးရွယ်အိုများ၏မျိုးဆက်သစ်များ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုနှင့်မျှော်မှန်းချက်ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးဤနယ်ပယ်တွင်အလားအလာအသစ်တစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်ရန်စိတ်အားထက်သန်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သမာဓိရှိခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ Win-Win ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုတောင်းဆိုသည်။ အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများ၊ နည်းပညာကြံ့ခိုင်ခြင်း၊ စံစစ်ဆေးခြင်းစနစ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ကောင်းမွန်သောမိတ်ဖက်များဖြစ်သည်။
ရှေ့သို့ တရုတ်နိုင်ငံအတွက်အထူးဒီဇိုင်းသစ် ၂၀၂၀ အရည်အသွေးမြင့်မောင်းနှင်ခြင်းဖိနပ်လက်လုပ်အမျိုးသားများပုံမှန်အားကစားဖိနပ်
နောက်တစ်ခု: အသစ်ရောက်ရှိမှုဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းပူနွေးရသောဆောင်းရာသီပုံမှန်သားရေသိုးမွှေးများသည်အမျိုးသမီးများအတွက် Moccasins ဖိနပ်
၁။ သင်ကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီလား။ ထုတ်လုပ်သူလား။
ဖြေ။ ။ စက်ရုံနဲ့ကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီပါ
ဖြေ။ ။ ဥရောပနဲ့အမေရိကတိုက်၊ တောင်အာဖရိကနဲ့အရှေ့တောင်အာရှမှာအများဆုံး။
ဖြေ - ကျွန်ုပ်တို့သည်လူကြီးများနှင့်ကလေးများအတွက်မိုးလုံလေလုံဖိနပ်များ၊ moccasins များ၊ ဘွတ်ဖိနပ်များ၊ ဖိနပ်များနှင့်အခြားဖိနပ်များအထူးပြုသည်။
နမူနာအခကြေးငွေနှင့်ကုန်ပစ္စည်းများအတွက်သင်၏ Paypal အကောင့်သို့သင်ပို့နိုင်သည်။
ပုံမှန်အမှာစာအတွက်ငွေပမာဏကို B / L မိတ္တူနှင့်ဆပ်ရန် T / T ၏ ၃၀% သိုက်ကိုလက်ခံပါသည်။
ရက်ပေါင်း ၃၅-၄၅ ရက်အတွင်းအရေအတွက်နှင့်ထုတ်ကုန်များပေါ်တွင်မူတည်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးကွက်ကိုအချိန်မရွေးလေ့လာနိုင်ရန်ကျွမ်းကျင်သော ၀ ယ်ယူရေးဌာနရှိသည်။ ပစ္စည်းအတွက်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းကိုရရှိနိုင်ရန်။
အရည်အသွေးကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ထိန်းချုပ်နိုင်သောအပြောင်းအလဲနှစ်ခုတွင် QC အဖွဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ODM / OEM ဒီဇိုင်းကိုအထူးပြုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဒီဇိုင်နာကပြtheနာအားလုံးကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ဒီဇိုင်းစိတ်ကူးဟာအဆင်ပြေပါတယ်။
Polybage တစ်ခုမှတစ်ခု၊ ၁၂/၁၈/၂၄ အတွဲတစ်ဘူး၌ပုံးတစ်ခုရှိသည်
ထုပ်ပိုးရန်အတွက် hangtap, hanger နှင့်အရောင်ခြယ်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်အထူးတောင်းဆိုချက်ရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အားအဆင်ပြေသည်ဟုပြောပါ။
အမျိုးသမီးများ / မိန်းကလေးများ Fairy နှင်းဖုံးဇာထိုးဖိနပ် ...
Hot Sales Mens Cowsuede Moccasin ခြေညှပ်ဖိနပ်ဆန့် ...
Micro Suede အထက်နှင့် Faux F နှင့်အတူတိုတောင်းသောအရုပ်များ ...
နာမည်ကြီးအမျိုးသား Cowsuede Venetian Venetian Slipper Moccasin I ...
အမှတ် ၁၂၉၉၊ Dongsheng ရိပ်သာ၊ Qingshanhu ခရိုင်၊ Chang Dong စက်မှုဇုန်၊ Nanchang, JX.China
အွန်လိုင်း Canton Fair သည်အိမ်တွင်းနှင့် ...
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ်စျေးနှုန်းစာရင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏အီးမေးလ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ထံပေးပို့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ ၂၄ နာရီအတွင်းဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။